P tokony hodinihina rehefa mifidy asa - Victor Mochere
Isan-taona dia mpianatra an-tapitrisany eran-tany no manatevin-daharana ny anjerimanontolo sy ny lohan'ny oniversite ambony, mamirapiratra amin'ny fientanentanana sy ny finiavana rehefa miditra amin'izay inoany fa hoavy mamirapiratra. Eny, ny fahatsinjovana izany ho avy izany dia hofaritana, indrindra, amin’ny alalan’ny fanontaniana iray: Inona no lalan’ny asa tokony hatao? Na dia mety efa nanana tombony aza ny sasany tamin'ny fahazoana fitarihana momba ny asa, ny ankamaroan'ny hafa dia hiatrika izany fanontaniana izany any aoriana any.
Raha ny tokony ho izy dia tokony hanomboka amin'ny taona voalohan'ny fianarana ambaratonga voalohany izany dingana izany, saingy mbola tsy tara loatra ny hamantarana ny asa sahaza azy. Betsaka ny asa azo isafidianana satria misy ny taranja misy eny amin'ny oniversite. Ny safidin'ny tsirairay dia mbola miovaova kokoa. Ahoana àry no fomba hamantarana sy hisafidy ny fomba handaniany ny ambiny-na ny ankamaroan'ny fiainan'ny olon-dehibe mavitrika? Misy tondro 5 (P) izay mamorona kompà mahasoa rehefa mandeha amin'ny ranomasina avo tsy fantatra amin'ny fanaovana safidy asa.
Andeha hojerentsika tsirairay ny antony maha-zava-dehibe azy ireo amin'ny fisafidianana ny lalan'ny asa.
4. Fampisehoana matihanina
5. Karazana toetra
Ny fientanam-po dia faniriana mahery izay mety hahatonga anao hanao zavatra mahagaga. Ny fitadiavana izay tena tianao dia dia iray ihany. Aza kivy raha mbola tsy fantatrao. Manandrama zava-baovao hatrany. Ho avy izany na dia tsy maintsy manorina aza. Ny fisafidianana asa mifanaraka amin'ny fitiavanao dia ny fisafidianana ny fahatanterahan'ny asa mandritra ny androm-piainany. Ahoana raha fantatrao fa tia zavatra iray ianao nefa tsy manao na inona na inona momba izany?
Izany no tena olana amin'ny fitiavana. Azonao atao ny manana ny firehetam-po rehetra eto amin'izao tontolo izao amin'ny zavatra iray, fa raha tsy manao na inona na inona momba izany ianao dia tsy ho fantatrao velively izay tena vitanao. Manomboha miasa amin'izany izao! Midira ao amin'io klioba io, milalao an'io fanatanjahantena io, mandray anjara amin'ny hetsika izay mitondra ny fitiavanao. Ny fitiavana dia hahatonga anao hifoha amin'ny misasak'alina hamita asa iray. Ny fitiavana dia hahatonga anao hiteny hoe TSIA amin'ireo fanelingelenana izay tsy mifanaraka amin'ny fahitanao. Ny fitiavana dia ny fiara izay hanokatra ny asanao. Izy io no lasantsy handoro anao amin'ny fanamby rehetra eny an-dalana.
Ho fanampin'ny fientanam-po, ny olona iray dia tsy maintsy mahavita akademika tsara amin'ny lohahevitra izay hitarika amin'ny asa nofinofiny. Mety ho liana amin'ny fitsaboana ianao fa ny fahombiazanao amin'ny siansa indrindra ny Biolojia dia ambany dia ambany. Mety mila miasa hendry bebe kokoa amin'io lohahevitra io ianao, na mitady asa hafa.
Tsarovy fa ny anjerimanontolo sy ny oniversite dia hanaiky anao amin'ny naoty aloha alohan'ny hahitany ny fahafinaretan'ny safidinao momba ny asanao. Ny naoty dia hivarotra anao, fa ny fitiavana no manosika anao. Fantaro hoe inona no lohahevitra manohana ny asanao. Avy eo dia manolo-tena hanatsara sy hanatsara azy ireo. Na dia afaka manampy amin'ny famantarana ny lohahevitra takiana amin'ny asanao aza ny mpanolotsaina momba ny asa, dia anjaranao ny mahazo ny naoty ilaina amin'ny safidy momba ny asanao.
Tsy ampy ny fanapahan-kevitra momba ny safidinao. Tsy maintsy manapa-kevitra ianao hoe ahoana no hahatongavanao any. Ny fizotry ny fandrindrana ny asa dia ahafahanao mamantatra ny tanjakao sy ny zavatra mahaliana anao mba hahitanao ireo fahafahana matihanina mety hankafizinao sy hahafinaritra anao. Mila mahatakatra ny zavatra ilainao ianao, ny tanjany, ny toetranao, ny fahaizanao, ny talentanao ary ny zavatra mahaliana anao mba hahazoana fahalalana momba ny akademika. ary fanapahan-kevitra momba ny asa. Tena ilaina ny manomboka manomana ny asanao aloha. Ahoana no aloha loatra? Mino aho fa raha vao miditra amin'ny fianarana ara-dalàna ny olona iray dia efa miharihary amin'ny fandrindrana ny asa.
Ny mpianatra sasany dia mahafantatra tsara izay tiany hatao eo amin'ny fiainana raha ny momba ny asa. Ny sasany tsy mahalala. Ny antony dia ny ankamaroan'ny mpianatra dia tsy mibaribary amin'ny matihanina amin'ny sehatra samihafa. Mamporisika ny ray aman-dreny sy ny mpitaiza foana aho mba hampiseho ny zanany amin'ny namany amin'ny asa samihafa. Ara-psikolojika, mianatra amin'ny alalan'ny fandinihana sy fakana tahaka. Manaitra ny fahalianan’izy ireo ny fisehosehoana amin’ny asa sy asa samihafa. Izany dia azo atao amin'ny alalan'ny asa, na aloka matihanina, internships, manatrika lahateny momba ny asa, na mitsidika fikambanana samihafa fotsiny.
Nahoana no zava-dehibe ny maha-olona amin'ny fisafidianana asa? Ny fianarana ny toetranao dia ahafahanao mankasitraka ny fihetseham-ponao, ny fitondrantenanao ary ny fomba fisainanao. Ohatra, aleonao miasa irery sa aleonao miara-miasa amin’ny hafa? Moa ve ianao ho afa-po amin'ny asa iray izay mitaky ny ho voalamina tsara sy hanana fandaharam-potoana voafaritra? Sa ianao no karazan'olona tia manana fandaharam-potoana malalaka sy miovaova izay mamela anao ho tonga ho azy? Ity fampahalalana ity dia hanampy anao amin'ny fanapahan-kevitra izay asa mifanaraka amin'ny safidinao manokana.